ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်း ဘယ်လိုဖွင့်ကြသလဲ? ဘယ်လိုဖွင့်ကြမလဲ? - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုသင်တန်း ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ သို့ နောက်ပြန်ဆုတ်ရန်
All ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုသင်တန်း ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ Pages
ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်း ဘယ်လိုဖွင့်ကြသလဲ? ဘယ်လိုဖွင့်ကြမလဲ?
ဒီနေ့ခေတ်မှာ တက္ကသိုလ်ကကိုယ်တော်လေးတွေ ဦးဆောင်ပြီးတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းတွေ နေရာတော်တော်များများမှာ တွေ့နေရတယ်။ ဒါဟာ ၀မ်းမြောက်စရာပြယုဂ်တစ်ခုပါ....။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဦးရေဟာ တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်။ သေသေချာချာစဉ်းစားကြည့်ရင် မဖြစ်သင့်ဘူး။ အဲဒီတော့ တပည့်တော်က တပည့်တော်မြင်တဲ့အတိုင်း ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းတွေမှာ လိုအပ်တာလေးတွေကို နည်းနည်းလောက်တင်ပြကြည့်မယ်။ (ကြိုက်တာ.မကြိုက်တာတော့ တစ်ကဏ္ဍပေါ့) တပည့်တော်အမြင်ကတော့ တပည့်တော်တို့တတွေ အပါယ်လေးပါး ကပ်သုံးပါးလောက်နဲ့တော့ တပည့်တော်တို့ဖွင့်နေတဲ့ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းဟာ အောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်- တပည့်တော်တို့ ငယ်.လက်.ကြီးအောင်ခဲ့တယ်။ စာတွေကိုလည်း တကယ်ကျက်ခဲ့တာပဲ၊ ကျောင်းမှာလည်း လူတော်စာရင်းဝင်ခဲ့တာပဲ...။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ တော်တော်များများကိုမေ့နေပြီ။ ဘာတွေမှတ်မိလဲဆိုတော့ အတွေးအခေါ်တွေ အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ မှတ်မိတယ်။ အဲဒီတော့ တပည့်တော်တို့လည်း ကလေးတွေကိုစာသင်တဲ့နေရာမှာ ဒါန-အကြောင်းသင်တဲ့အခါ
၂။ ဒါန-ကို ဘယ်လိုပြုရမလဲ
၃။ ဒါန-ပြုခြင်းရဲ့ ပစ္စုပ္ပန်အကျိုးတရား
၄။ ဒါန-ပြုခြင်းရဲ့ တမလွန်အကျိုးတရား
၅။ ဒါန-ရဲ့ နိဗ္ဗာန်ကို အထောက်အကူပြုပုံ-စသည်ဖြင့် စနစ်တကျပြောပြမယ်ဆိုရင် သူတို့စိတ်ထဲမှာ ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးအခေါ်တွေ အများကြီးရနိုင်ပြီး ဘာသာခြားတွေနဲ့ ပြောဆိုတဲ့အခါမှာလည်း ကိုယ့်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် အမြဲအဆင်သင့်ဖြစ်နေစေရမယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်လေးရတဲ့အထိ တိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်။
အခုပုံစံအတိုင်းဆက်သွားနေရင်တော့ အကျိုးတော့များပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် များသင့်သလောက်မများဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကို ခေတ်နဲ့အညီ နှိုင်းယဉ်ဝေဘန်ပြီး စီးပွားရေး...စစ်ရေး...အုပ်ချုပ်ရေး....ပညာရေး....အချစ်ရေ...လူမှုဆက်ဆံရေးစတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့တာကို တက်နိုင်သလောက်ထုတ်ဖော်ပြောပြသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုပြောနိုင်အောင်လည်း တပည့်တော်တို့က ပြည့်ဝသူတွေဖြစ်အောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်ဘုရား.....
အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တာတွေထဲမှာ... ဥပမာ လူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ အချစ်ရေးဆိုပါတော့...။ ဗုဒ္ဓစာပေထဲမှာ ချစ်ရေးဆိုနည်းပါသလားလို့ လူတွေကမေးချင်မေးပါလိမ့်မယ်.... တပည့်တော်ရဲ့အမြင်ကတော့ ပါပါတယ်..ဒါဆို ဘယ်နေရာ,ဘယ်ကဏ္ဍတွေမှာပါသလဲလို့ မေးစရာဖြစ်လာပြီ...။
ဥပမာအားဖြင့် မင်းကုသဇာတ်တော်မှာပဲကြည့် ပဘာဝတီရဲ့အချစ်ကိုရဖို့ မင်းကုသဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့သလဲ... အနစ်နာခံခဲ့တယ်... ယောကျာ်းတစ်ယောက်ရဲ့ လက်ရုံးရည်,နှလုံးရည်နဲ့ နောက်ဆုံးမှာ ပဘာဝတီရဲ့အချစ်ကို ရယူနိုင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လား...။ ဇိဉ္စမာနနဲ့စတွေ့ဆုံ အတိတ်ဘ၀မှာလည်း ဒီအတိုင်းပဲ... အရက်သမားဘ၀နဲ့ တရားဓမ္မကိုရှာဖွေနေသူ ဇိဉ္စမာနလောင်း ပရဗိုဇ်မရဲ့ အထင်ကြီးမှုကိုရဖို့ သူ့ထက်မြင့်မြတ်သာလွန်တဲ့ အကျင့်မျိုးဟန်ဆောင်ပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့... အရက်အိုးကိုထမ်းပြီး နောက်ကလိုက်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးထိတောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လေ..။ ဒါ... ဗုဒ္ဓကျမ်းလာ ချစ်ရေးဆိုနည်းပေါ့....။
ဒါဆို... စစ်တိုက်နည်းရောရှိလားလို့ မေးစရာဖြစ်လာပြန်ရော...ရှိတယ်လေ..။
မဟာဇနကဇာတ်တော်မှာ အရိဋ္ဌဇနကနဲ့ ပေါဋ္ဌဇနကညီအစ်ကို စစ်တိုက်တဲ့ပုံစံကို ကြည့်ပါလား...။ ညီငယ်က နန်းတော်ကထွက်ပြေးပြီးတော့ နယ်စွန်နယ်ဖျားတွေကို အရင်ဦးဆုံးစတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးမှာ မြို့တော်ဆီချဉ်းကပ်လာပြီး အကိုဖြစ်သူကို အနိုင်တိုက်ခဲ့တယ်...။ ဒီမှာ ဆိုလိုချင်တာက ရန်သူက အင်အားကောင်းပြီး ကိုယ်ကအင်အားနည်းနေရင် ပျောက်ကြားစနစ်ကို သုံးရမယ်..။ ကိုယ်က အင်အားကောင်းပြီး ရန်သူကအင်အားနည်းနေရင်တော့ တစ်စုတစ်ဝေးတည်းနဲ့ အကောင်းဆုံးတိုက်ခိုက် အနိုင်ယူရမယ်ဆိုတာလေ..။
ဒါ့အပြင် မဟောသဓာဇာတ်မှာလည်း ရန်သူဘုရင်ရဲ့ဝန်းရံမှုကို ခံရတဲ့အခါမှာ ရန်သူဘုရင်ရဲ့နန်းတော်ထိရောက်အောင် ဥမင်လှိုင်ခေါင်းတူးပြီး မိဖုရား,မယ်တော်,သမီးတော်တွေကို ရအောင်ကြံဆောင်ခဲ့ပြီး ရန်သူဘုရင်ကို အငိုက်မိစေတဲ့အပြင် ဧက၀ဋ်ပုဏ္ဏားကိုအောင်နိုင်ခန်းဟာလည်း အရမ်းကို ခမ်းနားလွန်းခဲ့တယ်လေ....။ ဒါတွေက သိသာရုံလေးတွေ ထုတ်ပြထားတာပါ....။ ဒါမျိုးတွေ ဗုဒ္ဓစာပေမှာ အများကြီးပါပါတယ်...။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်က ခေတ်စားခဲ့တဲ့ မြေအောက်လှိုဏ်ခေါင်းဟာ ဗုဒ္ဓနောက်ပိုင်း အများကြီးကိုခေတ်နောက်ကျပါသေးတယ်...။
နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ သုတေသနအားနဲ့ လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ ဘာသာခြားတွေကမေးရင်တောင် ကိုယ့်ဘာသာရဲ့အကြောင်းကို ခေတ်မှီမှီဖြေကြားနိုင်တဲ့ ကျောင်းသား,ကျောင်းသူကောင်းတွေ မွေးထုတ်ပေးနိုင်အောင် တပည့်တော်တို့ကိုယ်တိုင်က ခေတ်မဆန်ဘဲ ခေတ်မှီတဲ့တွေးခေါ်ခြင်းမျိုး အဲဒီလိုတွေးခေါ်နိုင်တဲ့အရည်အချင်းမျိုးတွေ လိုအပ်နေပြီ..။
အဲ... တစ်ခုတော့ရှိတယ်... ဘယ်လိုပဲ အတွေးအခေါ်ခေတ်မီပါစေ... အနေအထိုင်တော့ ရိုးရမယ်နော်.....။ ။ ။ ။ ။